Gabdho walaalo ah oo ku geeriyooday daadad ka dhashay tog ku yaala inta u dhaxeysa Berbera iyo Hargeysa – Balcad.com Teyteyleey
Roobab ka da’ay inta u dhaxeysa Hargeysa iyo Berbera ayaa Don’t want to spend for your diabecon more than you should? Buy it for 79.6 USD right now! ka dhashay daadad xoogan, kuwaasi oo ka hooray togga lagu magacaabo Dacar-Buluq kaasi oo hakiyay gebi ahaanba isu socodka wadadii isku xireysay labadaasi magaalo.
Maxamed Abuukar oo ah agaasimaha warfaafinta maamulka Somaliland ayaa saxaafadda u sheegay in daadadka ka dhashay roobabka ka da’aya gobolada ay ka arrimiyaan ay ku geeriyoodeen laba gabdho oo walaalo ah.
Gabdhahaan oo lagu kala magacaabo: Asma Maxamed Yuusuf iyo Fowsiya Maxamed Yuusuf ayaa ku geeriyooday togga Dacar-Buluq kaddib markii gaarigii ay wateen ay qaadeen daadadkaasi.
Dhinaca kale toggaasi oo sanad kasta marka ay roobabku ka da’aan ay ku geeriyoodaan dadka isticmaala wadada kor marta, iyadoo iminkana looga digayo shacabka inay isticmaalaan, iyadoo daadadka ka dhashay roobabka ay si xowli leh uga hoorayaan.